I-Fractional Co2 Laser Factory - China Fractional Co2 Laser Manufacturers, abahlinzeki
High Quality ephathekayo Co2 F ...
1060nm 4 Izibambo Diode Lase ...
I-Picosecond Laser Tattoo Rem ...
808nm Diode Laser Izinwele Remo ...
Ikhwalithi ephezulu ephathekayo ye-Co2 Fractional Laser Vaginal Tightening Scar Mole Skin Rejuvenation Machine
Inhloko yokuskena ehlakaniphile, ukusebenza kalula nokonga isikhathi. Amakhanda wokuhlinza asetshenziselwa ukusika umaki wesikhumba nezipikili ezingenile, i-compound nevus ne-intradermal nevus njll. Amakhanda we-Gynaecology1, 360 ° no-90 ° ukwelashwa, Igolide Eligoqwe i-vertebral body laser line-reflectivity ephezulu futhi linomphumela omuhle wokwelapha. Amakhanda we-Gynecology2, ukwelashwa kwe-vulva labia, ukususwa kweLabia mhlophe ukususwa kwe-Melanin. Ipulaki lokundiza ngaphandle lisebenzisa ingxubevange yensimbi esezingeni eliphakeme, izikhonkwane ze-solder zegolide ezingama-24 ngaphakathi.Zenza isixhumanisi sithembeke
I-Fractional Co2 Laser Vaginal Tightening Laser Medical Co2 Laser Acne Scar Ukususa Umshini
Inhloko yokuskena ehlakaniphile, ukusebenza kalula nokonga isikhathi. Amakhanda wokuhlinza asetshenziselwa ukusika umaki wesikhumba nezipikili ezingenile, i-compound nevus ne-intradermal nevus njll. Amakhanda we-Gynaecology1, 360 ° no-90 ° ukwelashwa, Igolide Eligoqwe i-vertebral body laser line-reflectivity ephezulu futhi linomphumela omuhle wokwelapha. Amakhanda we-Gynecology2, ukwelashwa kwe-vulva labia, ukususwa kweLabia mhlophe ukususwa kwe-Melanin. Ipulaki lokundiza ngaphandle lisebenzisa ingxubevange yensimbi esezingeni eliphakeme, izikhonkwane ze-solder zegolide ezingama-24 ngaphakathi.Kwenza isixhumanisi sithembeke ...
I-Fractional Co2 Laser Machine ene-Glass Tube
Umshini Wokuqinisa I-Laser Co2 Laser
Inhloko yokuskena ehlakaniphile, umsebenzi wokhiye omusha, cindezela inkinobho M ukuze ushintshe ihluzo, cindezela isikhathi eside imizuzwana emithathu ukulungiselela, '+' kungakhulisa usayizi wesithombe, futhi u - '-' usetshenziselwa ukunciphisa usayizi wesithombe. Kulula kumakhasimende ukusebenza. I-Laser emitter: I-Laser ingeniswe isuka e-USA, Amandla aphezulu angafinyelela ku-100W, Impilo yesevisi: amahora angama-2000. Ubakaki omusha we-dimmer ungafiphazwa ngaphandle kokuqaqa umshini. Ingalo ehlangene engu-7 ehlangene, ukusebenza kwe-360freely, kunciphisa kakhulu amandla we ...